Otu esi etinye TeamViewer na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Kwado ebe nchekwa TeamViewer
Otu esi eji TeamViewer
Otu esi ewepu TeamViewer
TeamViewer bụ igwe ojii njikọ dịpụrụ adịpụ nke na-eme ka ịnweta ngwaọrụ ọ bụla dịpụrụ adịpụ, gafee nyiwe, site na ebe ọ bụla n'ụwa. Enwere ike iji ikpo okwu maka nzukọ dị n'ịntanetị, njikwa anya, ịkekọrịta desktọpụ, na ịnyefe faịlụ n'etiti kọmputa.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi eme Wụnye, mepee ma jiri TeamViewer na desktọpụ Ubuntu 20.04 gị.
Nzọụkwụ ọzọ mgbe ibubata igodo GPG bụ ibubata ebe nchekwa ahụ n'onwe ya. Site na ebe a, ị nwere ike ọ bụghị naanị ịwụnye TeamViewer kamakwa nweta mmelite n'ọdịnihu. Iji bubata ndekọ aha, mee ihe ndị a echo iwu na ọdụ Ubuntu gị:
Ozugbo ịmechara ebe nchekwa TeamViewer, ị ga-emelite ndepụta ngwugwu gị ugbu a iji gosipụta mgbanwe ndị ahụ site na iji iwu mmelite dabara adaba:
Ọzọ, tinye TeamViewer site na iji iwu a:
Mara, enwere ike ịjụ gị ihe ndị a:
ụdị N ma ọ bụ Y dabere na mkpebi gị; Ọtụtụ ga-apịnye N. Ozugbo emechara, pịa tinye igodo aga n'ihu.
Nyochaa nrụnye na TeamViewer na-ewu site na itinye iwu a:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, TeamViewer arụnyere nke ọma na bụ ụdị 15.21.4 n'oge e kere nke a nkuzi.
Site na nrụnye zuru oke, ị nwere ike ịgba TeamViewer n'ụzọ dị iche iche. Nke mbụ, ka ị nọ na ọdụ Ubuntu, ị nwere ike iji iwu na-esonụ:
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ iwu Teamviewer n'azụ ka ịtọhapụ ọnụ ọnụ:
Agbanyeghị, nke a adịghị mma, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na desktọpụ Debian gị meghee ụzọ ahụ: Ihe omume> Gosi ngwa> TeamViewer. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ imepee TeamViewer, ị ga-ahụ windo na-esote na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ EULA wee nabata ya.
Ọzọ, ị ga-abata na ihuenyo ngwa TeamViewer ndabara dị ka n'okpuru:
Iji TeamViewer dị mfe nghọta. A na-enye gị NJ njikọ, ya na kọmpụta na-abụghị nke ya, yana paswọọdụ.
Dịka ọmụmaatụ, ịchọrọ ijikọ site na kọmputa B na kọmputa A. Need ga-achọ kọmputa A njikọ id dị n'okpuru TeamViewer Kwe ka njikwa anya n'elu ebe etiti; nke ID gị 374 392 364 a ga-eji maka nkuzi.
Na kọmputa nke abụọ, aha ya bụ kọmputa B, jiri njikọ njikọ nke kọmputa A nke na nkuzi ikpe bụ 374 392 364 na Fanye ogige ID onye mmekọ, na pịa njikọ.
N'agbanyeghị, na Kọmputa B, njikọ ga-eguzobe na Kọmputa A. Window ọhụrụ na-enye ndụmọdụ arịrịọ nnọkọ njikọ ga-apụta ma kpalie gị ịbanye Kọmputa A (id onye mmekọ ị na-ejikọ na) paswọọdụ. Tinye paswọọdụ wee pịa ya Banye na bọtịnụ.
Na-esote, ọ bụrụ na ihe niile arụ ọrụ nke ọma, a ga-ejikọ gị na nnọkọ TeamViewer, ọ bụkwa ya.
Iji wepu ngwa TeamViewer na sistemụ Ubuntu gị, mee iwu na-esonụ na njedebe gị:
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye, malite na jikọọ na kọmputa dịpụrụ adịpụ site na iji TeamViewer na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 20.04 gị. N'ozuzu, TeamViewer bụ otu n'ime ụzọ kachasị mfe na nke a ma ama maka ọtụtụ ndị nwere na desktọpụ ha iji banye na sistemụ ndị ọzọ maka ụdị ihe ọ bụla. Otu bụ isi nyere aka na okwu nkwado. TeamViewer bụ n'efu maka ojiji onye ọ bụla. Agbanyeghị, ojiji azụmahịa ọ bụla ga-achọ ikike ịzụrụ.
Wụnye otu Microsoft Ubuntu 20.04 LTS
Categories Ubuntu Tags TeamViewer, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo